महरालाई नपक्रन सुरक्षा निकायलाई प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको दबाव ! – ताजा समाचार
महरालाई नपक्रन सुरक्षा निकायलाई प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको दबाव !
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार महरालाई प क्रा उ मात्रै नगरिएको हो। उनलाई अभियुक्तसरहकै व्यवहार प्रहरीले गरिरहेको छ। भन्छन्, ‘घटनास्थलमा भएका वस्तु बरामददेखि लिएर पीडित महिलाको बयानसमेत लिइसकेका छौं।’ महरासँग मात्रै बयान लिन बाँकी रहेको उनी सुनाउँछन्।